Posted by Bo Hnin | 05/09/2010, 00:47
I haven’t read it. Cd you tell usabit more? Do you mean right means might? The powerful has the right to do xxxx by virtue of its might? Is that what you mean, sir?
Posted by zizawa | 05/09/2010, 01:05
End justifies means ကို မကြိုက်ရတာက End က အရေးမကြီးလို့ မဟုတ်ပါဘူး။ ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်က အရေးကြီးပါတယ်။ ကိုယ်ဘာဖြစ်ချင်သလဲဆိုတဲ့ ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်ကို မူတည်ပြီး၊ ဘာတွေလုပ်သင့်သလဲဆိုတဲ့ လမ်းကြောင်းကို ရွေးချယ်ရပါတယ်။ End guides means လို့ ပြောရင် လက်ခံနိုင်ပါတယ်။
သို့သော်လည်း “to justice or injustice, to humanity or cruelty … စတာတွေကို ဂရုစိုက်နေစရာမလိုဘူး (Discourse- Chapter XLI)” ရည်ရွယ်ချက် ကောင်းရင်ပြီးရော ဘာလုပ်လုပ် မှန်တယ်, တရားတယ် ဆိုတဲ့ အမြင်ကို မကြိုက်တာပါ။ သူ့နိုင်ငံကို ပြင်သစ်နဲ့ စပိန်ရဲ့ သြဇာခံဘ၀က လွတ်မြောက်ချင်တယ်, အုပ်ချုပ်သူတွေဟာ တာဝန်ယူစိတ် ပိုရှိစေချင်တယ်, အာဏာရှင်စနစ်မျိုးထက် စည်းကမ်းရှိပြီး ခိုင်မာတဲ့ Republic စနစ်မျိုး ပေါ်ပေါက်စေချင်တဲ့ မက္ခိယာဗယ်လီရဲ့ ရည်ရွယ်ချက် ပန်းတိုင်တွေက ကောင်းပါတယ်။ သဘောကျပါတယ်။ သို့သော် ဘာလုပ်လုပ် တရားတယ်ဆိုတဲ့ အမြင်မျိုးတွေကြောင့် သူ့အရေးအသားတွေက အာဏာရှင်တွေက ပိုပြီးသဘော ကျစေခဲ့ပါတယ်။ မူလရည်ရွယ်ချက်တွေ ကောင်းပေမယ့် ရွေးချယ်တဲ့ လမ်းကြောင်းမှားနေရင် လိုရင်းပန်းတိုင်ကို မရောက်နိုင်ပါဘူး။ ရောက်လု နီးနီးဖြစ်ခဲ့ရင်လည်း အရှည် တည်တံ့နိုင်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။
Posted by ဧရာ | 05/09/2010, 10:35
ကိုဧရာရဲ့ မှတ်ချက်တွေအတွက် ကျေးဇူးပါ။ ကိုယ့်ရဲ့ ရည်မှန်းချက်ပြည့်ဖို့ ဘာလုပ်လုပ်တရားတယ်ဆိုတာဟာ လက်ခံရခက်တယ်။ ရည်မှန်းချက်က ကောင်းနေရင်တောင် တချို့ လုပ်ရပ်တွေဟာ ဘယ်လိုမှမတရားဘူး။ ဥပမာ ကိုယ့်လူမျိုးတွေ အားလုံးလွတ်လပ်ဖို့ ကြားထဲက ဘာမှမဆိုင်တဲ့၊ ကိုယ့်လူမျိုးတွေကို ဖိနှိပ်မှုအတွက် အပြစ်မရှိတဲ့ လူတွေကို ဖမ်းဆီးသတ်ဖြတ်မှ ရမယ်ဆိုရင်တောင် ဒီဖမ်းဆီးသတ်ဖြတ်မှုဟာ ဘယ်လိုမှ မတရားဘူး။ ဒါပေမယ့် တဘက်မှာ စိတ်ဝင်စားစရာ counter ဥပမာတွေပေးလို့ရတယ်။ ဆိုပါစို့ စတာလင်ဂရက်တိုက်ပွဲကို ဆိုဗီယက်က အနိုင်တိုက်ရတဲ့အခါ စစ်နိုင်ဖို့က အဓိကပဲ။ အဲဒိအတွက် ပေးဆပ်ရတဲ့ တဦးချင်းလွတ်လပ်ခွင့်တွေ၊ ဆုံးရှုံးမှုတွေဆိုတာ စာဖွဲ့လို့တောင်မရဘူး။ လူတိုင်းလူတိုင်း စစ်မှုမထမ်းချင်ရင် မထမ်းဘဲ နေပိုင်ခွင့်ရှိသင့်တယ်။ တဘက်မှာ တချို့ အခြေအနေတွေမှာ ဒီလိုအခွင့်အရေးမျိုးတွေကို ပိတ်ပင်တဲ့အလုပ်ကို မတရားဘူးလို့ ပြောရခက်သွားပြန်ရော။ လူသတ်တာ မတရားဘူး။ ဒါပေမယ့် တော်လှန်ရေးလုပ်ဖို့ ပြင်နေတဲ့အချိန်မှာ အားလုံးဒုက္ခရောက်စေမဲ့ အရေးကြီးတဲ့ လျှို့ ဝှက်ချက်တွေကို ရန်သူ့ဘက် သတင်းသွားပေးမဲ့လူတယောက်ကို သတ်တာကို မတရားဘူးလို့ ပြောရခက်တယ်။ တခုတော့ ရှိတာပေါ့။ ဒီလုပ်ရပ်ဟာ မတရားဘူးဆိုတာကို လက်ခံပြီး မတရားတဲ့အလုပ်ကို မတတ်သာလို့ လုပ်ရတယ်လို့ ပြောချင်ပြောပေါ့။ တဘက်ကလည်း လူတအုပ်လုံးကြီးအသတ်ခံရမဲ့ကိစ္စကို သိသိနဲ့ မတားဆီးဘဲ ခွင့်ပြုထားတဲ့လုပ်ရပ်ကရော တရားသလားလို့ ပြန်ပြောလို့ရတယ်။ ဖီလော်ဆော်ဖီမှာ သိပ္ပံမှာလို ယတိပြတ် အဖြေတခု ထုတ်နိုင်ဖို့ကလည်း ခက်သားပဲ။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ကိုဧရာရဲ့ မျှမျှတတရှိတဲ့ မှတ်ချက်တွေအတွက် ကျေးဇူးပါ။
Posted by zizawa | 05/09/2010, 11:26